Manana Anarana Mahatsikaiky Ny Sarim-Biby Famantarana Ny Mondialy 2018 Ao Rosia Ary Tsy Azonao Akory Aza Izany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Oktobra 2016 6:02 GMT
Vakio amin'ny teny Español, srpski, Português, English
Sary: Kevin Rothrock.
Manana Anarana Mahatsikaiky Ny Sarim-biby Famantarana ny Mondialy 2018 Ao Rosia Ary Tsy Azonao Akory Aza ny Dikany.
Tamin'ny herinandro lasa teo, namoaka ny sarim-biby famantarana ny Amboara Eran-tany FIFA 2018 izay ho tontosaina atsy ho atsy i Rosia. Amboadia antsoina hoe “Zabivaka” ilay izy. Mitondra solomaso volondaoranjy (lazain'ny olona sasany fa toy ny solomaso fanaovana ski) izay tsy miala eny amin'ny lohany voloina mihitsy ity bandy kely mahafatifaty ity, ary manao kilaoty fohy sy T-shirt.
Mety ho sarotra aminao ny hahatakatra hoe inona no somary mahatsikaiky ratsy momba ity amboadia tsy manantsiny tahaka ny olona ity raha tsy mahay teny Rosiana ianao. Mba hahatakarana izay mampikakakaka ny Rosiana manerana izao tontolo izao, handeha isika hamerina hijery ny sasany amin'ireo fiteny sarotra sy ny andianteny ara-kolontsaina mifandraika amin'izany.
Niseho voalohany ampahibemaso tao amin'ny fandaharana efa amin'ny alina dia alina tao amin'ny fahitalavitra Rosiana i Zabivaka. Hitanao amin'ny sary etsy ambony, avy aty ankavia miankavanana, ilay Amboadia Zabivaka, ny minisitry ny fanatanjahantena Rosiana teo aloha Vitaly Mutko, ny mpandray vahinin'ny fahitalavitra Ivan Urgant, ary ny kintan'ny baolina kitra Ronaldo Luís Nazário de Lima.
Mahatsikaiky fa i Vitaly Mutko no niandraikitra ny fanambarana ny anaran'ilay biby famantarana, izay efa malaza ratsy ao Rosia noho ny tsy fahaizany manonona ny teny anglisy tamin'ny fisehoana imasom-bahoaka isan-karazany tao anatin'ny taona vitsivitsy. Efa nampalaza ny tenany toy izany izy hany ka nandambolambo azy mihitsy tao amin'ny filankevitry ny governemanta tamin'ny 20 Oktobra ny Praiminisitra Dmitry Medvedev, tamin'ny nanononana ny iray tamin'ireo hadisoana malaza indrindra nataony tamin'ny teny anglisy, rehefa nomena ny toerana ho praiminisitra lefitra i Mutko .
Efa afaka mitsidika ny tranonkalan'ny FIFA sahady ianao sy mamaky ny tantaram-piainana kely mahafinaritra an'i Zabivaka, izay fariparitana ho “matoky tena sy mahay miara-monina aman'olona.” Fa mampanontany tena ny hoe ahoana iny amin'ny lohany iny? Araka ny FIFA, majika ilay solomaso : “Manao ilay solomaso hanaovana amin'ny fanatanjahan-tena mahafinaritra izy rehefa manao zavatra; mino izy fa hanome azy ikendrena hery manokana ilay solomaso rehefa eo ambony kianja. Ary tiany tokoa ny alaina sary!”
Notsoahana avy amin'ny matoanteny hoe “zabivat” (забивать), izay manana dikany maromaro, ilay anarana “Zabivaka”. Ny fandikan-teny voalohany sy mivantana indrindra dia ny “mahatafiditra baolina” noho izany dia olona iray mahatafiditra baolina i Zabivaka. Raha ny fahitàna azy, izany no tao an-tsain'ilay mpamorona ilay amboadia, dia ilay Rosiana Yekaterina Bocharova mpamolavola endrin-javatra, raha nanome ny anarany izy.
Amin'ny teny Rosiana, anefa, afaka mi-“zabivat” zavatra hafa maro dia maro koa ianao.
Toa mifanakaiky amin'ny “zabiyaka” ny fahenoana ny “Zabivaka” izay midika hoe “mpampijaly ny hafa” na “mpanakorontana.” Olona iray manao izay isian'ny ady ny zabiyaka. Tsy dia ampiasaina matetika intsony io teny io ankehitriny ao Rosia, ary mety hahita azy any anaty bokin'ankizy ianao, na amin'ny sarimihetsika Sovietika momba ny ankizy any an-tsekoly, saingy mbola fantatry ny maro loatra ilay izy ka mora fantatr'izay mpiteny Rosiana. Mananihany anao sy manositosika anao ny zabiyaka, mandra-panomezanao azy totohondry .
Ilay Amboadia Mandrahona mandray anao amin'ny Fiadiana ny Amboara Eran-tany FIFA 2018 ? Sary: fanaovana dinika Pikabu
Midika ihany koa hoe “miezaka be manao zavatra iray” na “mijanona amin'ny fanaovana zavatra iray” ny “Zabivat”. Azonao ampiasaina ilay matoanteny rehefa miresaka fingitrihana any an-tsekoly, fisarahana, ny tsy firaharahiana ny hevitry ny hafa, na tsy fetezana hiatrika ny olanao. Tenin-jatovo ny fampiasana izany voambolana izany, ary teny fanafohezana fomba fitenenana iray izay ahitana ihany koa ny voambolana hoe “khui” izy izay teny ratsy sy teny vetaveta Rosiana fampiasa indrindra. Fanakambanana tsara ho an'ilay biby famantarana sy ilay hetsika ara-panatanjahantena mitentina miliara dolara maro, sa tsy izany?
Ilay tena Zabivaka pic.twitter.com/5GMmK7ZKmi
Ny “mamono olona ho faty” no fandikan-teny hafa ny “zabivat”. Amin'ity lohahevitra ity, ampiasaina amin'ny fitantarana vaovao miresaka heloka bevava sy amin'ny resaka famonoana biby fiompy ilay teny matetika.
Fa ny tena zava-dehibe indrindra ho an'ny mpisera aterineto, manana heviny manokana amin'ny fambolena zava-mahadomelina ny “zabivat”. Midika hoe manesika sigara amin'ny marijuana (rongony raviny) ny “zabivat”. Tenin-jatovo efa hatry ny ela, izay efa nampiasaina am-polontaonany maro, ary tsy dia be mpampiasa intsony ankehitriny. Na izany aza, na iza na iza ao Rosia mihoatra ny 12 taona — na dia ireo mandry maso amin'ny jamala fotsiny amin'ny sarimihetsika aza — dia mahalala ny hevitr'ity tenin-jatovo ity.
Snoop Saika Alika Amboadia “Zabivaka” miaraka amin'ny fitazomam-peony fanta-daza. Sary: Tabilao-tsary Rosiana